Suuraalee :Baqattoota Oromoo Dambalaa Fachaanaa Qubatanii Jiran
Ajjeechaa Moyyaaleetti ta'een booda lammileen Oromoo Keeniyaatti baqatan amma Solooloo bakka Dambalaa Fachaanaa jedhamu jiru. Jaarmayaan Mootummootaa haga yoonaa baqattoota gara kuma 10 ta'an ka galmeessee​ ta'uu beeksise.
Baqattoonni kunneen hedduun isaanii uffata uffatanillee hin qabani, haga qe'ee dhiisanii dhufanitti nageenyi bu'uttis ofirra deebi'uu akka hin deebine ka himan.
Jaarmayaa Mootummootaatti Dameen Dhimma Baqataa UNHCR baqattoota kana keessaa garri caalu daa'immanii fi haadholii ta'uu hima.
1 Mucaan dubraa kun Machii jedhamti, obboleettiishee quxisuu 'Leelloo' baattee jirti. Machii fi Leelloon torbee sadiin dura maatii isaanii waliin mooyyalee baqatanii gara Keeniyaatti cehani. Yoo harmeen ishee sagalee (nyaata) qopheessan Machiin Leelloo eegdi.
2 Manni isaan keessa bulan Pilaastika 'rraa ka qophaaye waan ta'eef bokkaan yoo roobu lolaan lola'ee akka rakktataa jiran dubbatu
3 Ajjeechaa Moyyaaleetti ta'een booda lammileen Oromoo Keeniyaatti baqatan amma Solooloo bakka Dambalaa Fachaanaa jedhamu jiru
4 Jaldeessaa fi Waariyoon (Warreen Guddoon lameen) hiriyoota. Isaanis maatii waliin Moyyaalee dhaa as gara Keeniyaatti qaxxaamuran. Buufata yeroof keessa jiran ka Soloolootti argamu gahuufis deemsa guyyaa afurii maatii waliin deemanii dhufan.